परिवार मद्दत: यो के हो, कसरी लागू गर्ने र यसलाई अनुरोध गर्न आवश्यकताहरू अर्थव्यवस्था वित्त
बेरोजगारी, बेरोजगारी लाभ, परिवारको सहयोग। यी सर्तहरूको लागि तपाइँको काम हराउने बित्तिकै तपाइँको ओठमा हुनु सामान्य हुँदै गइरहेको छ, किनकि कहिलेकाँही अर्को भेट्टाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ। तर धेरै पटक दुई सर्तहरू राम्ररी परिचित छन्। त्यसो भए तेस्रो होईन।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने परिवारको सहयोग के हो, के अनुरोधहरू पूरा गर्न आवश्यक छ, यसलाई कसरी गर्ने र यसमा के समावेश छ, तब हामी यी सबै कुराको बारेमा कुरा गर्नेछौं ताकि तपाईं यसलाई राम्ररी बुझ्नुहुनेछ।
1 परिवारको सहयोग के हो?
1.1 के परिवार समर्थन सदाको लागि चार्ज गरिएको छ?
2 बेरोजगारी थकानका लागि परिवार सहायताको लागि कसरी आवेदन दिने
3 मद्दतको लागि कसरी आवेदन दिने यदि तपाईंसँग बेरोजगारको अधिकार छैन भने
4 म किन 451 XNUMX१ यूरो चार्ज गर्दैछु?
परिवारको सहयोग के हो?
सामान्य शब्दमा, "परिवार सहायता" भनेको 451,92 XNUMX१..XNUMX .XNUMX युरो प्रति महीनाको भुक्तानी हो जुन पारिवारिक जिम्मेवारी भएका बेरोजगारहरूलाई प्रदान गरिन्छ र जससँग उनीहरूको जागिर छैन, र बेरोजगारीका कारणले फाइदा पनि थोरै हुन्छ, वा उनीहरूले यो स collect्कलन गर्न सक्दैन, तिनीहरूसँग खर्च खर्च गर्न सक्दैनन्।
यद्यपि, थोरैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने, पारिवारिक सहयोगका लागि त्यहाँ वास्तवमै दुई प्रकारका सब्सिडीहरू छन्, जुन एक अर्काबाट पनि फरक छन्।
परिचित मद्दत। सब्सिडीको बारेमा जुन बेरोजगारी लाभ समाप्त भए पछि स .्कलन गरिन्छ। यद्यपि तिनीहरू सबैलाई दिँदैनन्, तर पारिवारिक जिम्मेवारीहरूको अस्तित्व बाहेक आम्दानीको अभाव हुनुपर्दछ।
परिचित मद्दत। यो पनि एक सब्सिडी हो तर अघिल्लो भन्दा फरक यो बेरोजगारी लाभ पहुँच गर्न सकिदैन जब शुल्क लिइन्छ। अब, यो अनुमोदनको लागि, तपाईसँग कम्तिमा charges ० दिन योगदानहरू हुनुपर्दछ, पारिवारिक शुल्कका साथै।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, दुबै समान छन्, तर आवश्यकताहरू स्वयं पूर्ण भिन्न छन्।
के परिवार समर्थन सदाको लागि चार्ज गरिएको छ?
होईन, परिवार समर्थनको एक "समाप्ति मिति" छ। पहिलो कारण जसले यस सहायतालाई फिर्ता लिन सक्छ यसको कारण यो छ कि एक रोजगार सम्झौता कामदारसँग हस्ताक्षर गरियो। एक आवश्यकता पूरा गर्न असफल भएर, जुन आयको अभाव हो, सहायता स्वतः रद्द हुनेछ। अब, यसको मतलब यो होइन कि यो पुनः सुरु गर्न सकिदैन, जे होस्, सबै कुरा प्रत्येक विशिष्ट केसमा निर्भर गर्दछ।
साधारणतया, सहायता १ 18 महिनाको लागि मात्र संकलन गरिन्छ। यो छ देखि छ महिना देखि नवीकरण गरिएको छ। तर त्यहाँ त्यस्ता केसहरू छन् जुन त्यो लामो समयसम्म रहन्छ। उदाहरणका लागि:
Unemployment unemployment बर्ष भन्दा कम उमेरका बेरोजगारहरू थकित बेरोजगारी लाभको साथ (तर यसलाई कम्तिमा 45 महिनासम्म प्राप्त गर्दै)। तिनीहरू २6महिनाको परिवार सहयोगको लागि हकदार हुनेछन्।
थकित बेरोजगारी लाभका साथ 45 people बर्ष भन्दा माथिका बेरोजगार व्यक्तिहरू (तर यसलाई कम्तिमा months महिनासम्म प्राप्त गरे)। २ months महिनाको मद्दत।
थकित बेरोजगारी लाभका साथ 45 people बर्ष भन्दा माथिका बेरोजगार व्यक्तिहरू (तर यसलाई कम्तिमा6महिनासम्म प्राप्त गरे)। तिनीहरूले अधिकतम months० महिनासम्म अवधि बढाउन सक्दछन्।
बेरोजगारी थकानका लागि परिवार सहायताको लागि कसरी आवेदन दिने
यदि तपाईको बेरोजगारी समाप्त भएको छ र तपाईले अझै जागिर पाउन सक्नुहुन्न भने, तपाई सक्नुहुन्छ बेरोजगारी लाभको थकानका लागि परिवार सहायताको लागि आवेदन दिनुहोस्। अब, तपाईले आवश्यकताहरूको एक श्रृंखला पूरा गर्नुपर्दछ जुन:
हड्ताल पूरा भयो।
बेरोजगार रहनुहोस् र रोजगार खोजीकर्ताको रूपमा दर्ता गर्नुहोस्।
एक महिना प्रतिक्षा गर्नुहोस्। यसलाई "प्रतीक्षा महिना" भनिन्छ, जब बेरोजगारी समाप्त हुन्छ र पारिवारिक सहयोग अनुरोध गरिन्छ बीचमा, तपाइँले रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ कि भनेर हेर्न।
पारिवारिक शुल्क भएको। परिवार आश्रित द्वारा यो बुझिन्छ कि तिनीहरू २ 26 बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरू हुन्, तर पति / पत्नी पनि (यदि यो आर्थिक रूपमा एकमा निर्भर छ) वा अशक्त बच्चाहरू।
न्यूनतम अन्तर्व्यापी वेतनको% 75% भन्दा बढी आम्दानी भएको छैन।
यदि तपाईं आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आवश्यक छ प्रतीक्षा महिना पूरा गरे पछि १ business व्यापार दिनहरूमा परिवार सहायताको लागि आवेदन दिनुहोस्। यो गर्नका लागि तपाईले एसईपीई (वा अनलाइन गर्नुहोस्) मा जानु पर्छ र उनीहरूको प्रतिक्रियाको लागि पर्खनु पर्छ। तपाईंसँग DNI हुनुपर्दछ, दुबै तपाईंको र पारिवारिक पुस्तक र पति / पत्नीको ID; बैंक कागजात जहाँ खाता नम्बर देखा पर्दछ; र आयको प्रमाण।
मद्दतको लागि कसरी आवेदन दिने यदि तपाईंसँग बेरोजगारको अधिकार छैन भने
त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्, जब रोजगार सम्झौता समाप्त हुन्छ, बेरोजगारीको अधिकार हुँदैन, किनकि उनीहरूसँग 360 75० दिनसम्म योगदान छैन। जब यो हुन्छ, र हामीले पहिले उल्लेख गरेका अन्य आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन् (पारिवारिक आश्रितहरू, आयको XNUMX XNUMX% भन्दा बढी एसएमआई नभएको र बेरोजगार), तपाईं परिवार सहायता अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
अहिले, यसलाई स to्कलन गर्ने समयहरू धेरै फरक हुन्छन्।
यदि तपाईंले केवल 3-4--5--3 महिना मात्र योगदान पुर्‍याउनु भएको छ, र तपाईंसँग पारिवारिक आश्रितहरू छन् भने तपाईंले सब्सिडी केवल 4-5--XNUMX--XNUMX महिनाका लागि संकलन गर्नुहुनेछ, कुनै थप।
यदि तपाईंले6भन्दा बढी तर १२ महिना भन्दा कम योगदान गरेको छ भने, तब सब्सिडी months महिना हुन्छ यदि तपाईंसँग पारिवारिक आश्रित छैन भने, वा २१ यदि तपाईंले गर्नुभयो भने।
जबसम्म तपाइँ १२ महिना भन्दा बढीको लागि योगदान दिनुहुन्छ, तपाइँले बेरोजगारी लाभ अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।
म किन 451 XNUMX१ यूरो चार्ज गर्दैछु?
यस तथ्यको बाबजुद पनि, जस्तो कि हामीले तपाईंलाई भनिसकेका छौं, परिवारको सहयोग 451 60१ युरो हो, त्यहाँ थुप्रै केसहरू छन् जसमा व्यक्तिहरू चार्ज गर्दैनन्, र उनीहरूले 120० यूरो, १२०, २२225 युरो लिन्छन् ... किन त्यसो हुन्छ?
वास्तवमा यो होइन कि तिनीहरू गलत SEPE मा थिए, तर त्यहाँ "सानो प्रिन्ट" छ। जसमध्ये कसैले पनि तपाईंलाई सूचित गर्दैन, र यो यही हो कि पारिवारिक शुल्क भए पनि तपाईंको मद्दतलाई सानो बनाउँछ।
के हुन्छ 2021 देखि, परिवार सहायता गणना को लागी, तपाईंले हस्ताक्षर गर्नुभएको अन्तिम सम्झौतालाई ध्यानमा राखियो। यदि यो आंशिक समय वा घण्टाको सम्झौता हो भने, तब राज्यले १००% भुक्तान गर्दैन, किनकि त्यसले पहिले गरिरहेको थियो, तर यसको सट्टामा काम गरेको घण्टाको अनुपातमा अनुपात दिन्छ।
यदि तपाइँ आधा कार्य दिन काम गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले आधा भत्ता पाउनुहुनेछ। यदि तपाई कम घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले कम सहयोग पाउनुहुनेछ। त्यो सजिलो छ। अघि, सबै सर्तहरू पूरा भयो यदि सबै सर्तहरू पूरा भए; तपाईंको अन्तिम सम्झौता के हो भन्ने कुराको पर्वाह नगरी।
त्यसो भए पनि, यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि यो गल्ती भएको हुन सक्छ, SEUP कार्यालयमा आमने सामने भेटघाट गर्नु र आफ्नो केस प्रस्तुत गर्नु उत्तम हुन्छ। किनभने तिनीहरू पनि कहिलेकाँही गल्ती गर्न सक्छन्।
परिवार समर्थन तपाइँलाई स्पष्ट छ? के तपाइँलाई कुनै शंका छ? हामीलाई भन्नुहोस् र हामी तपाईंलाई यो समाधान गर्न मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछौं। अर्को विकल्प तपाइँ लिन सक्नुहुन्छ सल्लाह लिन को लागी, त्यस तरीकाले, तपाइँ तपाइँको विशेष मामला प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र एक अधिक उपयुक्त समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » संकट » परिचित मद्दत